Izahay dia mamerina mijery ny iPhone 6 aorian'ny fampiasana iray volana | Vaovao IPhone
Androany dia iray volana izay no lasa hatramin'ny nandehanako tany amin'ny Apple Store any Río Shopping, Valladolid, hividianana ilay iPhone vaovao 6. Noho izany, efa ela aho no nampiasa ilay fitaovana isan'andro ary afaka nahazo hevitra feno momba izay atolotray an'ity iPhone ity sy izay azontsika antenaina amin'izany.
Androany, misy olona maro izay mbola tsy manana ny iPhone 6 ary misalasala raha hividy azy io na tsia satria ny fomba fitondrantenany isan'andro. Amin'ity famintinana kely ity dia lazaiko anao izay rehetra nitranga nandritra ity volana fiainana ity an'ny fitaovana vaovaon'ny orinasa paoma.
1 Ny fanombohana nandrasana hatry ny ela
2 Aiza no anaovana ny tsy fitoviana
3 Tsy mainty na fotsy ny zava-drehetra
4 Tianay ny maka sary
5 Tsara kokoa sy lava kokoa
6 Fanairana, mpiaro eo imasom-bahoaka
Ny fanombohana nandrasana hatry ny ela
Na dia nanana famandrihana aza aho dia nandeha tany amin'ny Apple Store tamin'ny 6 maraina mba hijery ny atmosfera ary hiresaka amin'ireo mpiasa alohan'ny fanombohana manan-danja indrindra amin'ny taona ao amin'ny magazay. Rehefa tonga aho dia hitako fa ny Río Shopping dia iray amin'ireo ivontoerana fiantsenana vitsivitsy (raha tsy izy irery) any Espana izany dia tsy mamela ny alina hijanona ao anatiny amin'ny fanombohana iPhones.
Tokony ho tamin'ny 6 ora sasany dia nanomboka nandalo tao anatin'ny magazay kely izahay ary niaraka tamina mpiasan'ny Apple foana. Toy ny fomban-drazana, eNy orinasa maraina no nandoa ny sakafo maraina ary afaka nizaha toetra ireo fitaovana izahay nandritra ny filaharana, nanamafy ny fanapaha-kevitro hoe iza no maodely hifidy. Tamin'ny 8:00 maraina, tao anatin'ny kiakiaka sy horakoraka, niditra tao amin'ny Apple Store izahay. Amin'ny 8:10 dia efa teny an-tanako ny iPhone 6 Silver.
Aiza no anaovana ny tsy fitoviana
Tena mampiseho ny halehiben'ity iPhone ity rehefa mitazona azy eny am-pelatananao ianao. Vao tsy ela akory izay no henoko tany fa izany Io no iPhone manana endrika be indrindra tamin'izay rehetra natao. Ary fahamarinana toy ny tempoly izany.
Ny lamosina aluminium manontolo sy ny boribory boribory dia mahatonga azy io hahazo aina tsara, zavatra izay anampian'ny fahazavana azy koa. Lafiny mahafinaritra iray hafa mampino amin'ity modely vaovao ity ny ny curvature an'ny écran eo amin'ny sisiny, izay tena mahazo aina rehefa manao fihetsika amin'ny fampiharana isika.
Tsy mainty na fotsy ny zava-drehetra
Ny zavatra sarotra indrindra manapa-kevitra rehefa handeha hividy ny iPhone 6 aho dia ny loko. Raha vantany vao nariana ny volamena noho ny fifanoheran'ireo tarika fotsy (mahatsiravina, raha ny hevitro), dia nizara roa ny hevitro Volafotsy sy volondavenona volondavenona. Tamin'ny farany dia nanapa-kevitra ny hividy ilay Volafotsy aho (na dia ny iPhone 5 aza dia mitovy loko ihany).
Na izany aza, roa herinandro dia nanapa-kevitra ny hifindra any amin'ny Space Gray aho noho ny antony tsy fantatro. Te hanana fanovana lehibe kokoa fotsiny aho. Namandrika iPhone indray aho tao amin'ny Apple Store ary lasa nanakalo ny volafotsiko ho an'ny Space Gray. Ity dia zavatra iray izay ataon'izy ireo tsy misy olana amin'ny fivarotana ao amin'ilay orinasa nandritra ny dimy ambin'ny folo andro voalohany rehefa avy nividy ny vokatra ianao.
Tianay ny maka sary
Ankoatra izay dia miavaka izy ary mety mety maniry bebe kokoa na latsaka, ny fakantsary dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny iPhone vaovao ary nanao ezaka manokana i Apple hanatsara.
Ny fakan-tsarimihetsika dimy vaovao maka sary tsara kokoa (indrindra amin'ny toe-hazavana ambany) ary mamela antsika handrakitra horonantsary amin'ny 240 fps mahavariana.
Ho fanamarihana, ny iray amin'ireo zavatra nahasarika ny saiko momba ny endrika ivelany dia ny peratra manodidina ny solomaso. Araka ny fantantsika, ity iray ity manana loko hafa miankina amin'ny maodely: amin'ny volafotsy dia volafotsy y amin'ny volamena dia volamena. Na izany aza, amin'ny Space Grey dia tsy volondavenona, fa mainty.
Tsara kokoa sy lava kokoa
Ny efijery Retina HD amin'ireo iPhones vaovao dia mahavariana fotsiny. Ny fitomboan'ny refy dia zavatra ankasitrahana amin'ny fampiasantsika isan'andro, satria tsy vitan'ny hoe lehibe kokoa izy io, fa tsara kokoa. Ny efijery vaovao dia maranitra ary toa tsara kokoa amin'ny fomba fijery samihafa.
Avy amin'ny bateria dia azontsika atao ny milaza fa maharitra kokoa izy io, saingy tsy misy fihoaram-pefy. Io dia hahafahantsika mankany amin'ny faran'ny andro ary hihazona ny ampahan'ny ampitso aza. SAINGY dia mbola lavitra ny andrasan'ny mpampiasa jereo amin'ny ho avy.
Fanairana, mpiaro eo imasom-bahoaka
Mila miaiky aho fa tiako ny manaparitaka be ny fitaovako ary mitondra azy ireo arovana araka izay azo atao. Mampiasa fonony avy amin'ny marika aho izao Spigen izay mangarahara sy matevina mahazaka fianjerana isan'andro. Hatreto aloha dia mbola mety tsara.
Tonga ny olana rehefa mametraka mpiaro amin'ny efijery ianao. Mampiasa iray aho (araka ny hitanao amin'ny sary sasantsasany) ary ny marina dia izany ianao no miantoka ny traikefan'ny mpampiasa. Ny tsy itovizany amin'ireo maodely teo aloha dia ny nandrakofan'izy ireo ny efijery manontolo. Ankehitriny, rehefa miolaka manodidina ny sisiny izy ireo, dia tsy manarona ny vera manontolo izy ireo ary manimba tanteraka ny fahatsapana fihetsika mifehy. Heveriko fa tsy mila fotoana intsony ny fanesorana azy.
Eo amin'ny lafiny fampisehoana dia tsara ny fampisehoana ataon'ny iPhone amin'ny ankapobeny, ary ny famaritana azy dia mahatonga ny hafainganam-pandeha ho iray amin'ireo singa misongadina mandritra ny fampiasantsika isan'andro. Ny rafitra fandidiana, na izany aza, Io dia tototry ny bibikely izay tsy ho fantatsika raha tsy tonga tampoka izy ireo. Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo singa lehibe amin'ny fanatsarana an'i Apple.
Ny iPhone 6 dia fitaovana tsara amin'ny ambaratonga rehetra ary tsy misy fisalasalana hahafaly antsika ny mankafy azy isan'andro. Ny teboka ratsy, toy ny mahazatra, dia avy amin'ireo rindranasa izay mbola tsy voatsara amin'ny iPhones vaovao. Tsy fampijaliana ny fampiasana ny iPhone amin'ireo rindranasa ireo. Na dia fantatsika fa vetivety aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6 » Iray volana miaraka amin'ny iPhone 6
Mpampiasa Apple nandritra ny taona maro aho (iPod, iPad, iPhone isan-karazany, MacBook….) Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia vao voalohany aho no misalasala mafy raha hividy ilay iPhone 6. Rehefa nanova ny 4 aho dia nanandrana Samsung, tsy tiako izany, Nokia miaraka amin'ny lumia ary tena tsara izy ireo, saingy niverina tany amin'ny iPhone aho tamin'ny 5, izay mandeha tsara, saingy mahatonga ahy ho "miadana".
Ary sambany aho no misalasala, satria raiki-pitia amin'ny Xperia Z3 aho, ary na dia fantatro aza fa handresy lahatra ahy izy io, ny iPhone 6 dia ho "mitovy" lehibe kokoa…. Tena mikorontana aho, tsy afaka mamorona ny saiko ... Ary mila torohevitra aho ... Ankoatr'izay, toa tena tsara i Lolipop, heveriko fa maka Apple i Android .... Ary noheveriko fa tsy hisy izany !!!
Inona no lazainao…
Azo antoka fa tsy hahita fitaovana misy kalitao amboarina ianao ... azonao atao ny manonona nokia, sony, lg na samsung mitovy, ary mbola tsy manana fitaovana amin'ny kalitao ara-batana mitovy amin'ny iphone izy ireo ... (izay miondrika, mianjera ... hadalana tsy misy fangarony, zavatra iray ihany no mamaky sy mamaky mercdez benz qa nissan) etsy andaniny, mizara zavatra iray izy rehetra: android ... izay mahatonga ny iphone sy ios hivoaka tanteraka amin'ny mahazatra, ny isan'andro .. tsy manam-paharoa izy ary tsy misy afa-tsy io marika io sy ny fampiasa ao aminy ... raha fintinina, ny paoma sy ny iphone dia ho lasibatr'izay rehetra tsy afaka manana izany na mitady hevitra tsy hananana azy ...
Manome ahy ianao fa tsy fantatrao fa ao anatin'ny iPhone dia misy sombin-javatra antsoina hoe ,,, SAMSUNG SONY LG SHARP ETC… izay ilazanao fa tsara kokoa ny iPhone dia adala ianao… inona no tianao bebe kokoa? Manaja azy aho, saingy tsara kokoa? hanombohana na i Apple dia tsy manamboatra ny fahatsiarovany tselatra na milaza aminao ny momba ny CPU ...
Ny zava-misy tsy te hanana iPhone dia tsy mitovy hevitra amin'ny hoe tsy afaka mividy azy… ny teny nataonao ho zava-dehibe fa ny olona tsy maniry iPhone dia tsy afaka mividy izany hahaha… fa ianao dia tsara laza, t ianao? Na inona no hitranga raha tsy manana iPhone ianao dia tsy mila mihinana na misafidy terminal hafa mitovy lafo vidy?
buahhh nasehonao ilay mpiara-miasa aminao!
Apple dia tsy maintsy manakarama anao ho hendry ianao, ry BRAVO!
Tompokolahy, isika izay tsy afaka mividy iPhone, dia mahalala fa hiatrika Android mampalahelo isika hahahahaha
Teny avy amin'ny «rodrigo»
radiohead dia hoy izy:
Fahadisoana lehibe, fantatrao ve ny dikan'ny zon'ny mpamorona sy ny patanty? Apple dia tsy orinasa tompon'andraikitra amin'ny fangatahana ampahany amin'ny Samsung, Sony sns. Apple dia injeniera sy famolavolana 100%. Tsy haiko raha fantatrao fa na i Samsung dia mpanamboatra faritra sasany, toy ny maranitra sy tsmc, dia tsy afaka mampiasa ny haitao noforonin'ny paoma izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mora kokoa sy takatra kokoa, ny paoma dia manome anao ny fomba fahandro ... milaza aminao ny fomba sy ny antony, ary ny mpanamboatra dia manaraka fotsiny ny torolàlana, torolàlana izay tsy azo ampiharina amin'ny fitaovan'izy ireo satria paoma tsotra izao, ireo injenierany , an'ireo zavatra noforoniny sns.
Tsy mila fanboy na mpankahala ianao vao hahalala an'io fa mila manaraka fotsiny ilay hoe "tokony homenao an'i Kaisara izay an'i Kaisara"
Mamaly amin'ny radiohead
Tsotra, satria tanjona, tsy manavao intsony i Apple ... mampitombo ny haben'ny efijery io, manampy ny NFC sy zavatra hafa efa an-telefaona efa ela, ary faly ilay fanboy satria mino izy ireo fa ny iPhone vaovao no farany amin'ny teknolojia sy ny kalitao.
gio dia hoy izy:
Nanana ny finday rehetra aho mandra-pahatongan'ny 5S ary indray andro dia nomen'izy ireo samsung note 2 aho izay lehibe loatra amin'ny tsiriko ary novaiko tao amin'ny forum ho an'ny xiaomi m2s ary nanao vakansy aho ary nanam-potoana hampiasa android lava sy sarotra. ary ankehitriny dia tsy niverina tany amin'ny ios aho ny fahalalahana fa ny android dia manana peripheral generic izay mitentina 2 reais amin'ny ebay ary programa marobe hijerena ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra fanadihadiana toy ny andiany sns…. ary ireo programa be dia be izay manana an'io izay tsy ho ao amin'ny appstore mihitsy, toy ny fandraisam-peo antso, lasa mpampiasa android aho, efa nivarotra ny iphone aho ary mieritreritra fa tsy hividy hafa mihitsy, manana android izay mitaky ny ampahatelon'ny iphone 5s Mahery kokoa sy tsara kokoa ho an'ny tsiriko amin'ny tombony rehetra nolazaiko sy ny tena manan-danja indrindra
Azonao atao ny manova ny batterie dia mitondra kojakoja iray hafa izay averiko indray miaraka amin'ny charger ivelany ary tsy manahy intsony aho sao tsy tonga amiko ny bateria dia vonoiko ilay xiaomi dia ovako ny bateria afaka 10 segondra dia miodina aho ary mihodina tontolo andro
Ny zavatra estetika dia mampihomehy ahy satria ny zavatra voalohany ataontsika 99% dia ny mametraka fonony aminy satria tsy misy na inona na inona manindrona azy dia ny aliminioma, ny tiako holazaina dia mihodina ny estetika
Lazaiko aminao fa nanana ny iPhones rehetra aho ary tsy vola izany, noho ny antony hipetrahako
Mamaly an'i gio
Izaho dia mpampiasa Apple efa ela ary ny tena marina dia mahagaga ny 6, indrindra ny fampiononana, ny tena tsy tiako indrindra dia ny faharetan'ny bateria ary teboka iray manohana ireo orinasa hafa, manana aho fanontaniana iray, nividy azy ve aho? Ny iphone 6 amin'ny volamena ary ny tena marina dia tsy tian'ny andalana fotsy aho ary efa 20 andro no azoko, afaka mandeha manova azy ve aho aorian'ny 15 andro? Fantatro fa ny lokony dia ny kely indrindra hahaha tsara tontolo andro
Io indrindra no mampiavaka an'i Apple ary misy mpanaraka azy marobe, satria ao anatin'ny zavatra azo atao dia "mitovy" foana izy io. Manaraka torolàlana vitsivitsy izay tiantsika sy mahazatra anay izy ireo.
Mikasika ny iPhone 5 (io no efa nananako talohan'ny 6) dia ho hitanao fa misy fiovana betsaka amin'ny bateria sy ny hafainganan'ny fitetezana. Amin'ny fakantsary ihany koa. Ary eo amin'ny lafiny famolavolana dia mahagaga fa nampitomboin'izy ireo tamin'ny 0.7 ”ary mbola mahazo aina ihany.
Ho an'ny Lollipop dia aza manao izany, eny. Miverena amin'ny Android satria tena misy fantsona tsara ary satria hankafy azy ianao. Aza atao amin'ny Lollipop anefa satria mety tsy hanandrana azy mandritra ny taona iray hafa ianao, raha tsara vintana ny mahazo azy.
Yen Galvez dia hoy izy:
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho fa misambotra an'i Apple ny Android. Fa tsy araka ny eritreritrao.
Android dia misambotra an'i Apple amin'ny zava-dratsy rehetra nananan'i Apple. Mihidy amina tarika izy, tsy lasa open source intsony toy ny teo aloha, mihidy mihitsy aza ny ecosystem. Tsy afaka mamaka intsony ianao. Ary sarotra kokoa ny mahazo ireo rindranasa hifandray tsara amin'izy samy izy. Ary lazaiko ho mpampiasa Android izany.
Mifanohitra amin'izany no ataon'i Apple, maka ny tsara amin'ny Android. Misokatra izao. Nampihatra ireo widgets ianao. Henoy bebe kokoa ilay mpampiasa fa tsy asehoy azy izay mahasoa azy (ny mpampiasa dia te-hisalasala amin'ny mpiara-monina aminy hoe hatraiza ny halehiben'ny findainy na dia tsy misy ilana azy aza). Ny rindranasa dia mifandray tsy toy ny teo aloha (manana iPad aho ary manao zavatra haingana kokoa, toy ny mampakatra sary avy amin'ny dropbox ka hatrany amin'ny wallapop, toy izay amin'ny Android, izay tsy maintsy notafiko tamin'Andriamanitra ary tamin'ny farany dia naka pikantsary aho ary nesoriko ny borikiko ). Ary ambonin'izany, 8.1 dia nivoaka ary efa manana jailbreak, noho izany tsy ofisialy dia openource bebe kokoa noho ny Android.
Total ... mihodina ny latabatra. Ary miseho amin'ny fivarotana ny iPhone 6. Ary inona no tianao holazaiko aminao… Nampiasa wallapop aho hametrahana ny findaiko Android amidy ankehitriny ary hianjera ny iPhone 6.
Valiny tamin'i Yen Gálvez
Oscar Villen Rubio dia hoy izy:
Salama compi! Holazaiko aminao ny zava-nitranga tamiko, nanapa-kevitra ny handeha android aho volana vitsivitsy lasa izay ary hividy ilay izay ninoako tsara ary miaraka amina famaranana tsaratsara kokoa tamin'izay fotoana izay, avy amin'ny iphone 5 mankany amin'ny xperia z1 aho. Taorian'ny fampiasana 6 volana, na dia tsara aza, dia toa lehibe loatra ary tsy resy lahatra aho. Total izay nivarotako azy ary nividy 5s volamena ho ahy, tena lafo be !! Dia namidiko ny iPhone 5, naparitako tamin'ilay vehivavy ny 5s ary novidiko ilay black 6 ary zavatra iray ihany no azoko lazaina. Heveriko fa ity no iPhone tsara indrindra azon'izy ireo atao !!
Valiny tamin'i Oscar villen rubio
Sergio, raha manampy dia nanana (ary tsara fa manana) ny iPhone 4 aho, ilay namako 5 ary tamin'ity indray mitoraka ity dia natoloko azy arivo sy iray alina. Nanana LG G3 teny an-tànako aho ary tiako ilay famolavolana, saingy hitako ny olana mitovy amin'ny Iphone 6 (tsy lazaina intsony ny 6 plus), ny habe ... Izany no nahatonga ahy nihemotra, raha ny marina, nandeha aho amina magazay iray tamin'ny andro nivoahany nampitaha azy tamin'ny taona 5, ny 6 dia nanome ahy fahatsapana hazavana ary ho tapaka io.
Boribory sy boribory, manapa-kevitra ny hiala kely aho ary handeha ho any amin'ny 5s, saingy i Movistar dia manolotra tolotra tsara ho an'ny 6, noho izany dia hitako miaraka amin'ny 6 GB iPhone 64 miloko volondavenona (ho ahy ny tsara indrindra, toa efijery daholo ny zava-drehetra).
Ny herinandro voalohany dia nahatsiravina, tsy nahazatra ahy na inona na inona, misy ny zavatra tsy hitranga amin'ny Jobs, fa araka ny lazaiko ... izany rehetra izany dia ny herinandro voalohany. Androany ary aorian'ny 3 herinandro miaraka aminy, dia faly aho, haingana, tsy mandeha amin'ny safidy maro izay tsy nananako tamin'ny 4 (mazava ho azy), ilay fomba "fianakaviana" tena azo ampiharina….
Miombon-kevitra aminao aho fa tsara toa ny Lollipop, saingy ny mahazatra dia mitranga, tsy voatsabo ho an'ny telefaona rehetra ary mazava ho azy fa tsy hiditra amin'ny fitaovana rehetra izy io, raha miaraka amin'i Apple ianao dia azonao antoka fa mandritra ny 4 taona dia hanana ny fanavaozana farany ianao.
Ny fanapahan-kevitra farany dia anao.
Manantena aho fa nanampy anao (ary raha nanakorontana anao bebe kokoa aho dia miala tsiny, hehe)
Hampikorontana anao kely kokoa aho, ho hitako ny vidin'ny iPhone 6 sy 6 plus, ary ireo vaovao vitsivitsy, afa-tsy ny habe sy ny endriny ho ahy amin'ny ratsy indrindra ...
Fantatro fa paoma ny paoma, ary tsy misy tsara noho ny fahaiza-mitantana, ny fikirakirana ary izay rehetra fantatrao ... fa nanapa-kevitra ny hividy ny xiaomi mi 4 aho amin'ny 300 ary euro vitsivitsy ho an'ilay 64GB, ary ny ny marina dia somary faly aho, interface tsara, ranoka ary tsy misy fialonana amin'ny iphone. ny maha sinoa fotsiny no mahatonga ny olona hiverina be, fa avia ... mandeha tsara izy io, isan-kerinandro 1 fanavaozana. ratsy kokoa no nalaiko ity finday ity satria tsy tiako ny fomban'ny iphone 5 na 5s kely efa ananako ny 4 sy ny 5 ary miafara amin'ny tany foana izy ireo, lehibe be ny tanako ary ireo finday kely manify sy kely ...
avy eo nandeha tany Android aho niaraka tamin'ny Samsung S4 ... Aleoko tsy miteny ... 1 taona ary nivarotra azy, noho ny tsy fivarotana azy teo aloha ... fa ny tanjoko dia ny miandry ny taona tongaako hiverina amin'ny iphone 6plus ka izay tianao hiantsoana azy, farafaharatsiny mba hivoatra amin'ny lafiny famaritana, ram 2 GB azo antoka .. tsy ny GB ananan'izy ireo hatramin'ny 4 raha tsy diso aho… avia raha faly amin'ny ny iray anananao, miandry 1 taona .. tsia, avy eo na maka 6 na hivadika ho android, ary amin'ny taona manaraka dia manapa-kevitra indray ianao. Izany dia raha mieritreritra ianao fa raha mandray Android ao anatin'ny 1 taona dia hanome 300 € farafahakeliny ho an'ny findainao ianao amin'ny fiheverana fa nandany 700 € izany.
Edu, ny ram, 1, 2 na 3 GB dia tena mpihavana, ny Iphone 6 dia mihinana izay rehetra eny an-tsena amin'izao fotoana izao, efa nahazo an-tanana Huawei Honor 6 miaraka amina core 8 sy RAM 3 GB, isa Antutu : 42.000, isa Iphone 6 mio misy 1,4Ghz (64Bits) ary RAM 1GB: 55.000. Mihoatra ny isan'ny cores sy ny GB mety hananan'ny Smarphones dia ny fahalalana ny fomba hanatanterahana an'io fampisehoana io, andao hanao ny mahazatra, Android amin'ny farany dia "generic" ho an'ny rehetra (Samsung, Sony, Huawei, sns ), ny iOS dia natao ho an'ny fitaovana Apple ihany.
Raha ny momba ny Mi4, toa safidy tsara dia tsara izy io, android misy fisehoana iOS, ny zavatra tokana mety tsy haharesy lahatra ahy momba ny Xiaomi dia ny hoe tsy maintsy misafidy ny maodely 4G na 3G ianao ary fantatro fa 4G amin'izao fotoana izao any Eropa tsy mandeha izy, ahitsiho aho raha diso aho. Na izany aza, safidy tsara, tsy sitrako mihitsy izany.
Salama Alex, ny tsy fahitana ny iPhone no tsara indrindra, saingy tsy midika izany fa tokony nanao ondrilahy bebe kokoa izy ireo, ary betsaka kokoa rehefa namoaka ny ipad niaraka tamin'ny ram 1GB… izy ireo tao anatin'ny iray volana…. Raha ny momba ilay ondrilahy, mpampiasa maro no milaza fa manana vava maromaro hisokatra amin'ny safari .. tsy maintsy mamerina izy ireo noho ny tsy fisian'ny ram, naka ny xiaomi mi2 avy amin'ny 4G aho satria tsy misy 3G ao amin'ny tanànako ary efa nolazaiko fa fotoana fohy . Satria tsy tiako ny Samsung, dia hijanona amin'ny nexus fotsiny aho ary amin'ny zavatra hafa kely ... Tiako be i Apple ... saingy amiko, miadana be izy ireo amin'ny lafiny fanatsarana isan-taona .. . ary mamoaka finday 4 fotsiny isan-taona izy ireo (efa 1 izao) ny ratsy kokoa dia ny fanovana habe sy bateria fotsiny ...
Raha ny momba ny Ram ekeko, azon'izy ireo natao ny nametraka 2 GB mivantana, heveriko fa ny andiany s (6s) dia hitondra ireo 2GB amin'ny ipad ireo.
Amin'izao fotoana izao dia tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa aho amin'ny fitondrana 1 GB, saingy mazava ho azy…. Nanao ny dingana aho tamin'ny iPhone 4 ka hatramin'ny 6, izay sarotra ho azy ny mahatsikaritra 😉
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, lazaiko foana fa efa nividy tsara tamin'ny Mi4 koa ianao.
Jose muñoz dia hoy izy:
Luis Manoro hevitra anao aho ity mpiaro ny efijery ity, vita amin'ny vera marokoroko izy ary manarona ny efijery iray manontolo! Ataoko eo amin'ny volondavenona i6 aho ary tsara be raha vantany vao tsikaritra izany ary tsy manapotika ny hatsaran'ny fitaratra miolakolaka, avelako ho anao ny rohy ebay:
Valiny tamin'i Jose muñoz
Mahaliana, tsy nahalala tanteraka an'ity marika ity aho. Misaotra nizara 🙂
Apple Store any La Cañada dia tsy mamela milahatra ao anatiny koa
Yosuke dia hoy izy:
Salama e! Nandany ny alina tany amin'ny fivarotana renirano Valladolid koa aho, avy tany Madrid nankany, niaraka tamin'ny sandry iray tamin'ny tsatokazo satria nieritreritra aho fa tsy ho matavy loatra, nifandamina tsara ny olona, ​​nifanome ny isa nomentsika ( Izaho dia nanana ny 10) afaka nandalo rehefa nanokatra izy ireo ary afaka niditra tao amin'ny toeram-pivarotana ary nomen'i Apple sakafo maraina izahay ary afaka nikitika ny tananay ilay iPhone 6 nandrasana hatrizay, tsy mbola nanao zavatra toa izany aho fa tena traikefa nahafinaritra. Haveriko tsy misy fisalasalana 🙂
Mamaly an'i Yosuke
Eny, mandraka androany dia mbola mitazona ny iPhone 5S aho. Raha ny fijeriko azy, miaraka amin'ny tetik'asa iPhone 6 Apple dia tapaka. Ho ahy dia tsy mbola io iPhone io ihany. Manana efijery lehibe loatra izy ary toa goavana daholo ny zava-drehetra. Afaka nanitatra tsara ny efijery izy ireo raha tsy nila namolavola fitaovana lehibe toy izany. Ankoatr'izay dia misy lafiny toa ny an'ny fakantsary izay mbola tsy tiako. Ary tsy haiko raha fantatrao fa ny tarika aoriana izay mamakivaky ny antena dia maloto amin'ny fotoana maharitra ary tsy afaka diovina. Toa hadalana izany, saingy hisy olona mihoatra ny iray handeha hialana amin'ny iPhone-ny ary maniry ho madio foana. Hanohy hiandry ny 6S aho ary raha tsy mandresy lahatra ahy izy ireo dia hanohy hofenoiko ny 5S-ko fa mandraka androany dia mbola iray amin'ireo finday tsara indrindra eny an-tsena. fiarahabana
Novidiko io ary azafady fa mitazona ny samung s5 aho
Azafady fa mila miditra amin'ny lamba maloto aho. Tamin'ny fanombatombanana mafy izay ho volavolain'ny iPhone 6 amin'ny volana Mey-Jona sy ny fahatsapako rehefa voasivana ireo tarika taty aoriana dia nanao hadisoana lehibe aho; Tsy nanana an'io iPhone 6 Plus tsara tarehy io aho izay tsy hovidiko akory ary nanisa avy hatrany aho tamin'ny filaharana tao amin'ny Apple Store Puerta del Sol hividianana iPhone 6 Space Gray 64GB voatokana teo aloha. Rehefa manokatra ny boaty sy amin'ny polyurethane fotsy manohana ny iPhone ianao, dia mariho fa nanao faribolana lavorary. Mitsiky ianao
Izany dia vao natao androany tao amin'ny sehatry ny haitao Apple miaraka amin'ireo vokatra vokariny satria manohy tsy manadino ny kinova voalohany amin'ny rindrambaiko «SMS» [iOS 1.0] izahay izay nanome aingam-panahy ny WhatsApp ary nanala ny Inbox sy Outbox be pitsiny an'ireo terminal namidy amin'izao fotoana izao amin'ny marika REHETRA handefasana SMS ara-dalàna toy ny resaka andriambavilanitra iray izay mamintina loatra ny teny, andao tsorina fa ratsy tarehy izany.
Tsy ilaina intsony ny miteny indray mandeha, ny iPhone 6 dia manana fahaizana miteny bebe kokoa amiko: Eny, marina izany, manohy maka tahaka aho rehefa maka tahaka ary tsy manam-paharoa ary raha te hisalasala ahy ianao dia anontanio ny zokiko lahy fa ho fantany na hitondra anao any amin'ny taniny na hiditra mivantana amin'ny ahy. Haingam-pandeha!
Pancho romo dia hoy izy:
Ny hevitro manetriketrika, nanana ny findaiko voalohany aho dia Panasonic, ary avy eo Nokia, tsy nisy iray tamin'ireo roa naharitra mihoatra ny 2 taona, nividy ny iPhone 2 aho tamin'ny septambra 2, ary mbola manana azy io amin'ny fomba tonga lafatra sy miasa 2007%, androany Novidiko ny iphone 100-ko, ho an'ny kalitao sy serivisiko izay itoerako miaraka amin'ny paoma .. hevitro ary zaraiko aminao .. Fiarahabana avy any Mexico ..
Valiny tamin'i Pancho Romo
MauritiusCm dia hoy izy:
Salama, naninona ianao no nanapa-kevitra ny amin'ny 6 fa tsy ny 6 plus? Hividy iray aho tsy ho ela ary mbola tsy fantatro izay iray.
Fahaiza-manao inona no atolotray ny 64G na 128G?
Ary marina ve fa tsy manakaiky ny toerana sy ny honohono rehetra any ivelany ireo fampiharana?
Mauricio, fialantsiny arivo amin'ny famaliako anao farany, nanapa-kevitra ny amin'ny iPhone 6 aho, satria tena lehibe ny plus, zatra iPhones kely aho manana iPhone 2 mandritra ny 7 taona miasa tsara, saingy 9 volana lasa izay dia nividy ilay iPhone 4s Fa maninona no ny iPhone 2 dia tsy azoko apetraka ny whatsap sy na ny facebook, sns ,,, resaka tsiro ny namako tena tiako ny iPhone 6 zatra an'izany amin'ny fomba lehibe, ary ny fahaizana manao ahantona ny tsirairay ho an'ny fampiasana azonao omena azy, manana 5 andro aho hiasa eto Mexico, tsy misy olana ny zava-drehetra tena tsara, raha ampitahaina amin'ny iPhone 4s haingana kokoa amin'ny zavatra rehetra, sy ny fampiharana hafa maro, heveriko fa eto any Mexico Miala ny 31 Oktobra 2014, Mauricio araka ny noresahiko azy raha mila serivisy misy kalitao sy antoka ianao dia manoro hevitra anao Apple, Fiarahabana avy any Sonora, Mexico
MauricioCM dia hoy izy:
Misaotra anao mamaly, tamin'ny valinteninao dia nisy fanontaniana iray nipoitra, avy any Mexico ianao ary mieritreritra aho fa nividy iPhone tany Etazonia ianao, handeha ho any USA aho afaka iray volana ary te hividy ny iPhone 6, tsy mahazo fotsiny aho ' Fantatro hoe iza ny orinasa tokony hividianako ao amin'ny Apple Store, novakiako ary toa novohana ireo Verizon ary mamela azy ireo hampiasaina any Mexico, fa ny Verizon iPhones dia tokony ho CDMA, izany hoe izy ireo aza mitondra hametraka puce aminy.
Ny fanontaniako dia: orinasa inona no nividiananao azy? Raha niaraka tamin'i Verizon izy, tonga tao amin'ny GSM na CDMA izany?
Misaotra anao, miandry ny valinteninao aho, ary ny arahaba avy any Mexico ihany koa. 🙂
Valiny amin'i MauricioCM
Mauricio, nividy azy tao amin'ny Apple Store aho, ary ny orinasa dia avy amin'ny T-Mobile, satria miaraka amin'ny Free Contract, nolazaiko tamin'ny zazavavy nanatrika ahy fa te hampiasa azy io any Mexico aho, ary nilaza tamiko izy fa tsy azoko antoka hoe inona no hiasa any Mexico, ny fifanarahana maimaim-poana T-Mobile, saingy nilaza taminy aho fa nividy azy ary eto dia napetrako ny Sim ary raha tsy mandeha izany dia averinao ny volako, ary raha nilaza tamiko izy fa manana aho 8 andro aorian'ny fividianana, inona no azoko atao? Ataovy izay tiako, atambatro ho loko hafa izy ireo, averin'izy ireo amiko ny volako, ary rehefa navoakako izany, ny zavatra voalohany nataoko dia ny nanala ilay chip T-mobile izay mitondra izany amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, napetrako ny puce Telcel-ko, novainay izany, natomboka Tamin'ny fikarohany signal ary tsy nisy Serivisy niseho, ary tao anatin'ny segondra dia noraisiny ilay signal mazava ary napetrany tamin'ny AT&T aho, izay ny signal diso ny chip Telcel, rehefa any Etazonia ianao. ny maodelin'ny iphone 6-ko dia ny A1549 hahazoana antoka fa raha mandeha izy dia mirary soa ry namako Mauricio….
Misaotra namako, tena nilainao ity nolazainao ahy ity :), tamin'ny zavatra novakiako dia nieritreritra aho fa ny Verizon no safidy tsara indrindra, fa aleo aho manandrana izay lazainao amiko, ary manana ny fisalasalana ihany aho raha hiasa izany Iusacell, manana drafitra miaraka amin'izy ireo aho, inona no lazainao?
Mauricio, any tsy haiko raha mety ho an'i Iusacell izany, heveriko fa raha niasa ho ahy ho an'ny Telcel ity T-Mobile ity dia tsy maintsy miasa ho an'ny orinasanao !!!, fanontaniana Mauricio rehefa niampita tany Etazonia ianao, moa ve ny orinasanao manana fandrakofana rehefa miampita ???
Tsy haiko, tamin'ny fotoana nandehanako farany dia nanana iPhone niaraka tamin'i Telcel aho, nefa inoako izany
Ohatrinona ny vidinao tamin'ny famotsorana azy? Nikaroka aho ary nahazo pejy izay mitaky vola 2,500 raha hanokatra T-Mobile any Etazonia.
Hitan'i Mauricio, raha manana fandrakofana Iusacell ianao rehefa miampita any Etazonia ianao, ary mora kokoa izany raha mividy telefaona ianao satria any no ahafahanao mitsapa azy raha mandeha na tsia ary azo antoka !!!!! Saingy araka ny efa noresahiko, raha tsy mandeha izy ireo dia heverina fa averin'izy ireo aminao ny vola, saingy tsy maintsy mividy azy ianao mba hanandramanao azy, satria tsy avelany hanandrana anao amin'ny telefaona nasehon'izy ireo ilay fivarotana, hojereko hoe iza amin'ireo mpiara-miasa amiko Iusacell no miasa ary manana ny puce ho an'ny iphone-ko aho ary mizaha toetra azy ary milaza aminao raha mandeha na tsia ...
Mihevitra i Mauricio fa ny T-Mopbile dia efa voahidy tao amin'ny orinasa (Mifandraisa Maimaimpoana) dia tsy mila mandoa na inona na inona akory ianao, mandoa fotsiny ny vola 702 dolara sahady amin'ny haba, ary alao antoka fa mifanaraka amin'ny fanentanana ataonao .. na izany averinao ny volon'ondry ...
Misaotra indrindra namana, nanampy betsaka ahy ianao 🙂 (sy)
Vaovao tsara Mauricio, nahazo puce iray avy tany Iusacell aho ary napetrako tamin'ny telefaoniko ary raha mandeha izany raha ekeko izany dia mametraka anao mitady izy avy eo ary tsy manome serivisy anao ary segondra vitsy dia manaiky izy ary efa mametraka ny famantarana sy ny anaran'ny orinasanao ary dia izay, ary nanontany azy koa aho raha nanandrana ny telefaona tany Etazonia izy ary nilaza tamiko izy raha misy ary raha misy serivisy ary tadidiny fa azony ilay AT&T dia tsara kokoa noho izany azo tsapaina ny puce anao rehefa mividy azy ianao, antenaiko fa hanome anao fahatokisan-tena bebe kokoa ity hividianana ny iPhone 6, mirary soa ary raha toa ianao ka mividy azy io hankafizanao azy io ary hikarakara azy io betsaka satria miezaka ny manangona volon'ondry kely, jhehehehe mirary soa ny namako Miarahaba anao, Hermosillo, Sonora,
Misaotra betsaka anao noho ny fanampiana nomenao ahy fahatokisan-tena bebe kokoa hividianana azy 🙂 Misaotra noho ny zava-drehetra ary manantena aho fa manana namana finaritra ianao, arahaba hahahaha
Miaraka amin'i Romo aho ... nanana telefaona Nokia, Samsung ary telefaona Apple hafa aho (Tsy manisa ny Alcatel, Motorola, sns hatramin'ny taona 90) ... ny tena izy dia tsy naharitra ahy mihoatra ny 2 taona izy ireo, raha tsy hoe tsy naharitra akory ny bateria, noho izany dia nijanona tsy niasa intsony ny écran fa efa lany andro ... ny zava-misy dia tao anatin'ny 1 na 2 taona hividianana finday vaovao (ary ilay taloha dia tsy nanana intsony sanda 3%) ... Miaraka amin'ny Iphone 4 ... na eo aza ny dona tsy misy mpiaro dia ento hiasa ao amin'ny ozinanao ao am-paosinao ary ny fotoana efa lasa, dia mbola JEREO vaovao ihany ... ary eo an-tampon'ny fa raha te-hanala azy izao aho dia hovidin'izy ireo amin'ny € 70-80 na na € 50 ratsy aza omen'ny mpandraharaha ahy amin'ny fandefasako azy ary mividy vaovao… Tsy misy loko… Mikasika ireo izay milaza fa mivory i Apple Samsung singa… seza koa mamory faritra Audi / W ary tsy mitovy amin'ny loko amin'ny kalitao akory izy ireo…
Yeray dia hoy izy:
Salama tsara, tokony holazaiko fa tsy maninona na ny sasany amintsika toa ny iOS sy ny hafa toa ny Android ... Samy manana ny lanjany isan-karazany ny olona tsirairay ary afaka misafidy ny finday tian'izy ireo ny tsirairay.
Aorian'io .. Niala tamin'ny 4S ka hatramin'ny iPhone 6 Plus aho ary ny marina dia faly be aho satria ny lafy ratsy hitako foana niaraka tamin'ny terminal Apple dia ny bateria ary miaraka amin'ny 6 plus dia azoko izay azoko. ilaina, olona mampiasa betsaka ny finday aho hatramin'ny fampiasako azy hahitako ireo naoty sy syllabi an-dakilasy, ankoatry ny tambajotran-tserasera, mailaka ary hafa hafa, saingy nahatsiaro ho maivamaivana aho rehefa hitako fa manohana ny fahombiazako isan'andro ny bateria. Raha tsy mino aho dia noho ny refy no ilazako fa tsy manana olana amin'ny haben'ny plus aho, te hanana finday lehibe kokoa aho ary niandry an'i Apple hanao an'io satria efa zatra Apple loatra aho vao afaka mifamadika Android iray ary sarotra amiko ny mitantana marika Android na inona na inona ary averiko ihany fa na dia Fanboy aza aho dia tsy anisan'ireo mieritreritra fa tsara kokoa noho ny iray hafa ny zavatra, Fanboy aho satria mahafeno ny fepetra takiana I mila.
Miarahaba antsika rehetra dia hilaza ny safidinao ianao.
Mamaly an'i Yeray
Hahaha misy yen galvez sasany izay milaza fa manidy ny android izy fa tsy afaka "ROOT" akory. Fa fantatrao ve izay lazainao? Taiza no nahitanao fa tsy afaka miorim-paka izy io. Manana ny preview Lollipop miorim-paka tanteraka aho. Afaka ary hitohy ho azo atao izany. Alahelo tsara hohenoina.
Eto Mexico dia efa ho tonga ny iPhone 6 ary tena tapa-kevitra ny hividy azy aho mandra-pahatongan'ny IOS8: - / ny iPhone 5 dia feno bibikely ary izay hitako dia mbola eo amin'ny 6: - [Mieritreritra bebe kokoa momba ny fanovana aho hatramin'ny S5
Valiny tamin'i Erik
GS dia hoy izy:
Avy any Mexico aho, manana ny iPhone 6 Plus aho, nampiasa ny vokatra Apple nandritra ny 5 taona mahery, ny antsipiriany hitako ao amin'ny 6 Plus fotsiny dia ny habeny, heveriko fa ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia ny iPhone 6. Na izany aza , Hanohy hampiasa ny 6 Plus aho, satria mifanaraka amin'ny zavatra ilaiko izany ary tiako ilay izy 🙂. Arahaba!
Valiny amin'ny GS
Frank21 dia hoy izy:
Salama, nividy ny iPhone 6 tany Etazonia ve ianao? Orinasa iza no nividiananao azy? Ary iza amin'ireo no ampiasainao eto Mexico?
Valiny tamin'i Frank21
Franky21 Tsy haiko raha nanontany ahy ianao fa valiako am-pifaliana ny fanontanianao, nividy azy tany Etazonia aho tao amin'ny Apple Store ary ny telefaona dia avy amin'ny T-Mobile Company an'ny an'ny Free Contract (Free Contract) ny 649.00 Dlls . ary ny maodelin'ny telefaona dia ny A1549 izay maodely Iphone 6, ary ny orinasa mampiasa azy dia avy any Telcel .. Miarahaba anao Franky21
Nividy ny iPhone 6 Plus tamin'ny vidiny 11 pesos tany Mexico aho tamin'ny olona iray izay nitondra azy avy tany Etazonia, maimaimpoana ho an'ny orinasa izany ary ampiasaiko amin'ny Movistar.
Ity no namako GS, niaraka tamin'ny Apple nandritra ny 7 taona hatramin'ny nivoahan'ilay iPhone voalohany aho, ary mbola nanapa-kevitra ny amin'ny iPhone 6 aho ary mampifanaraka ny habeny, fa hankafiziko ary maharitra 7 taona toa ny iPhone 2. .hehehehehe Fiarahabana
Salama e! Amin'izao fotoana izao dia mpampiasa android aho, talohan'ny iOS raha vao nivoaka ny taona 4, niova aho satria tsy tiako ny telefaona misy efijery kely toy izany satria tsy mahazo aina ahy izao amin'ny fanombohana ny laharana iphone 6 miampy ahy mieritreritra ny hividy azy amin'ny volana Desambra satria handeha hitsangatsangana any Etazonia aho. Saingy ny fisalasalako dia matahotra aho hividy azy io amin'ny fitsapana malefaka natao, ary nilaza aza izy ireo fa azo aforitra anaty paosy. Mila fijoroana ho vavolombelona matotra aho avy amin'ny olona iray izay tsy miaro na manohana ny marika paoma noho ny fanatisme (na izay homena vola hiresaka tsara izany) ary lazao amiko ny zavatra niainany na ny tolo-kevitr'izy ireo raha hividy izany na tsia. Misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Jose Diaz
Salama, niaraka tamin'ny iPhone 6 plus aho nanomboka ny asabotsy ary afaka manome toky anao aho fa tsy aforitra ao am-paosiko na zavatra mitovy aminy, ny marina dia nilaza tamiko koa izy ireo fa hiporitra ao am-paosiko ary tena nisalasala aho ny cam it. Ary ny marina dia tena faly aho.
Salama Lucia, hividy ny ahy rahampitso aho ary ny tena marina dia tsy haiko izay loko hanapahako hevitra 🙁
Mamaly an'i lina
Nampiasa ny iphone 5s nandritra ny herintaona aho ary afaka manome famintinana azy io, fitaovana iray azo ampiharina sy mahasoa ara-potoana isan'andro isan'andro aorian'izany rehetra izany dia fetra, mila mametraka iTunes amin'ny pc rehetra aho raha te hitahiry rakitra tsotra . Internet, wifi, Bluetooth, GPS miadana raha oharina amin'ny Android High-end, tsy afaka mizara sary amin'ny solosaina hafa amin'ny alàlan'ny bluetooh aho, mampifandray azy ao ambadiky ny fahitalavitra. Midika izany fa ny fitaovana dia tena voaorina tsara, marina, tsara habe, saingy voafetra tokoa amin'izao andro izao izay zaraina ny atiny rehetra.
Tsy namaky ny hevitra rehetra na adala aho satria boky lava be izy ireo ... fa raha mamaky x any aho dia efa nisy efijery lehibe kokoa arivo taona lasa izay ary ... fa raha handeha amin'ny marina isika fomba hanaovana azy ... Niandry ny fotoana mety i Apple mba hanana ny teknolojia hanaovana AZY TSARA, nanana galaxy note sy lumia aho ary efijery goavambe daholo izy ireo ... saingy mahatsiravina, tsy misy vahaolana ary ny andinindininy manokana amin'ny finday. Tsy ny zavatra andrasana amin'ny telefaona finday, ny apple dia nahavita tena tsara, tamin'ny fomba tsara, ny efijery faran'izay ambony sy ny telefaona finday, miaraka amina endrika kanto hatrany an-doha ka hatrany amin'ny tongotra, tsy fantatr'i Samsung intsony izay hatao mba hahatonga ny findainy ho tsara toetra , mahatsiravina ny sisin'ny vahindanitra, tsy tsara kalitao ny S5, plastika… mahazaka rano ve? Nisy namana iray nangina tamin'ny rano ary nianjera tamin'ny fako tamin'ny fahafinaretana, Apple tsy manana fiarovana rano ary zavatra tsara ho hita izany ... fa avy eo mandeha manodidina ny roimemy izahay. Hevitra farany ... Mahavita azy tsara i Apple, io no finday tsara indrindra hatreto.
Eny, ho 16 taona aho ary te hanana telefaona Apple foana, saingy ny habeny no nanosika ahy hiverina, rehefa nahita ireo iPhones vaovao aho dia nilaza fa ity no vintana azoko, niresaka tamin'ny raiko aho ary izahay nandeha tany amin'ny fivarotana Apple ary nangataka izany. herinandro ary farany talohan'ny omaly dia tonga ny iPhone volamena 6, tsy fantatro na hisafidy ny plus, fa lehibe loatra ary miaraka amin'ny 6 dia tsara aho manana izay ilaiko rehetra ary izaho manao tsara aho fa io no tsara indrindra amin'ny tsara indrindra, tsy manova na inona na inona eran'izao tontolo izao ny iPhone 6 azoko atao izao, ny raiko koa nangataka iray ho an'ny zavatra tiany Hahahaha mahafinaritra izany
Salama! ny 31 desambra dia nividy ilay volamena 6 iphone aho. Tiako ilay volafotsy fa satria tsy navela izy ireo ary nila ny telefaona aho satria tapaka ny ahy dia notehiriziko. Manoratra aho mba hanontany raha afaka mandeha any amin'ny fivarotana paoma aho mba hanovana ny lokon'ny findaiko, satria tsy afa-po amin'izany aho. raha tsy izany dia tonga lafatra.